🥇 ▷ Nokia 7.2 iyo Nokia 6.2 ayaa lasoo bandhigay! Waa kuwan astaamaha ✅
Nokia 7.2 iyo Nokia 6.2 ayaa lasoo bandhigay! Waa kuwan astaamaha
HMD Global ku soo bandhigtay moodellada Nokia cusub IFA 2019 ee magaalada Berlin. Aynu si dhow u eegno faahfaahinta farsamada ee Nokia 7.2 iyo Nokia 6.2.
Nokia 7.2 Xawaaraha iyo Qiimaha
Nokia 7.2 waxay leedahay shaashad 6.3 inji ah. Awooda Qualcomm Snapdragon 660 Chipset-ka wuxuu la imaanayaa laba RAM oo kaladuwan iyo laba ikhtiyaar oo keydinta gudaha ah. Fursadahaani waa; 4GB / 6GB RAM iyo 64GB / 128GB kaydinta gudaha. Awoodda kaydinta ee casriga ayaa la kordhin karaa 512GB iyada oo gacan laga helayo kaarka MicroSD.
Nokia 7.2Waxaa ku yaal 20 qalabka Megapixel kaameeraha dhinaca hore. Waxaa gadaal gadaal ka jira seddex dareemno kamarado ah. Dareemayaasha kamaradahaani waa: 48 megapixel master, 8 megapixel xagal ballaadhan iyo 5 megapixel sensor qoto dheer oo sawirro ah.
Telefonka casriga ah 3,500mAh batariwuxuuna taageeraa tikniyoolajiyada 10-watt ee degdega ah. Aaladda Nooca USB-C Ku dallacaya dekeda. Iyada oo leh jaakad jaakadleyda ah oo ah 3.5mm, Nokia 7.2 waxay la timid 4GB oo RAM ah iyo 64GB oo kaydinta gudaha ah. 300 eurowaxaa laga heli karaa.
Noocyada Nokia 6.2 iyo Qiimaha
Nokia 6.2 waxay leedahay shaashad 6.3 inji ah. xoog Snapdragon 636 on telefoonka smart helitaanka processor 3GB / 4GB RAM iyo 32GB / 64GB oo kaydinta gudaha ah. Dhanka hore ee taleefannada casriga ah waxay leeyihiin 8 Megapixel camera sensor.
Waxaa gadaal gadaal ka jira seddex dareemno kamarado ah. Dareemayaashani waa sida soo socota: 16 megapixel main, 8 megapixel angle ballaaran iyo 5 megapixel sensor qoto dheer. 3500 mAh batterigaNokia 6.2 waxay taageertaa 10 watts oo teknolojiyad dhakhso ah u dallaca.
Telefoonka casriga ah waxaa la heli doonaa Oktoobar oo leh 3GB RAM iyo 32GB kaydinta gudaha ah. 200 eurooo leh qiime sumad. Lama oga in aaladaha lagu iibin doono dalkeena iyo inkale.